Salaamanews » Dagaalkii ugu xooganaa oo isqabsaday deegaanno ku dhaw magaalada Jowhar
Home » Warar Dagaalkii ugu xooganaa oo isqabsaday deegaanno ku dhaw magaalada Jowhar Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 4th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Shil ay ku waxyeellobeen saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo ka dhacay Shabeellaha hooseDibad-bax lagu taageerayey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo ka dhacay AfgooyeWeerar saraakiil turkish ah lala eegtay oo ka dhacay MudugKooxda al-Shabaab oo laga qabsaday deegaan muhiim u ahaaTaliska Ciidamada Booliiska Galmudug oo ku goodiyey in ay wax ka qabanayaan ammaanka deeganadaasi
Sida dad deegaanka ku dhaw ay noo xaqiijiyeen dagaalka ayaa yimid kadib weerar gaadmo ah oo ay kooxda Al-shabaab ku qaaday fariisimo ciidamada dowladdu ay horey uga qabsadeen kooxda, waxaana markii dambe gurmad soo sameeyay ciidamo dowladda ka tirsan oo ka yimid magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in khasaaraha dagaalka uu badnaa laakiin maanay xaqiijin in dagaalka waxyeellada uu geystay ay intaasi dhameyd, waloow il wareed madax bannaan ay xogtaasi na soo gaarsiisay.
Taliyaha ciidamada dowladda magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe Asad Qaasim Maxamed, ayaa sheegtay in dagaalka ay ku dileen 15-ka tirsan dagaalyahanka Al-shabaab, wuxuuna sheegay in dhaawacyadoodii qaarkood ay hayaan ayna kooxdu ka carartay.
Taliyaha ayaa yiri”Xoogagga Al-shabaab ayaa nasoo weeraray sagaal saac habeenimo ee dagaalkuna wuxuu socday muddo saacado ah, dhankeenna waxaa nooga dhintay hal askari, laba kalena way nooga dhaawacmeen, inatii aan aragnayna 15 Al-shabaab ah ayaa naftooda ku waayay goobta, meydkoodii iyo dhaawacoodiina waa ka cararen” .
Xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa deggen saakay, iyadoo degaankaas ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya AMISOM, waxaana saakay furmay isku socodka gaadiidka isaga goosha Muqdisho iyo degmada Jowhar.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Garsaalle ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa noqday dagaalkii ugu xooganaa oo gobolka ku dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo fallaagada Al-shabaab.
Tags: warar « Qoraalkii HoreTaliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka oo ku dhaawacmay Muqdisho	Qoraalka Xiga »Madaafiicdii ugu xooganeyd oo lagu garaacay gobolka Shabeellaha hoose	Halkan Hoose ku Jawaab